Toeram-pisakafoanana an-tserasera Koreana an-tserasera - Kaody Bonus Bonus amin'ny Internet
(234 vato, average: 4.00 avy tany 5)
Loading ... Nandritra ny taona maro, ny filokana an-tserasera tao Korea Atsimo dia voafetra tamin'ny fiakaran'ny fifaninanana fiara, bisikilety sy sambo, ary lalao tao amin'ny loteria. SportsToto (SportsToto) dia natsangana tamin'ny taona 1997. Tamin'ny taona 2000, nametraka ara-dalàna ny filokana, fa ny ankamaroan'izy ireo kosa dia mpitsidika vahiny ihany. trano filokana iray ihany no nisokatra ho an'ny mponina teo an-toerana. Satria ny milina filokana ao amin'ny firenena dia tsy avela afa-tsy amin'ny filokana ihany, voafetra ihany koa amin'ny Koreana Tatsimo.
Noraran'ny olom-pirenenan'i Korea atsimo ny filalaovana kasino, tsy ny ao an-trano ihany, fa ny any ivelany koa. Mazava ho azy fa manamarina fa sarotra ny fampiharana an'io fandrarana io, saingy io dia mandalo sazy henjana mifanaraka amin'ny lalàna "Mpilalao vahiny mahazatra" miaraka am-ponja 3 taona farafahakeliny ary onitra hatramin'ny 25 000 dolara amerikana.
Ny teratany Koreana Tatsimo dia avela hilalao eo amin'ny namana sy ny mpianakavy amin'ny vola kely dia kely (latsaky ny 10 cents). Nomarihinay tao amin'ny katalaoginay ny filokana an-tserasera ao amin'ny firenena, misy loteria roa: Lotto sy Toto. Ny faharoa dia endrika filokana filokana.
Sarin'ady an-tserasera ao Korea Atsimo
Any Korea Atsimo, tsy misy lalàna filokana amin'ny Internet. Mandritra izany fotoana izany dia misy fitsipika maromaro mikendry ny famerana ny lalao sosialy sy horonan-tsary. Amin'izao fotoana izao, ny olona iray dia tsy afaka amin'ny ambaratonga ara-dalàna ny tranokala fanaraha-maso an-tserasera amin'ny firenena. Na izany aza, misy vavahady tsy ara-dalàna tantanan'ny vondrona mpanao heloka bevava voalamina. Rehefa hitan'ny maso ivoho mpampihatra lalàna izy ireo dia mihidy avy hatrany ireo tranokala ireo ary avy eo dia manokatra vaovao ihany koa.
Ampahany isan-jaton'ny mponina any Korea Atsimo no tsidihin'ny tranonkala filokana an-tserasera sy ivelany. Rehefa mikarakara ny famatsiam-bolany ny governemanta dia nanambara ny fikasana hanangana ady matotra amin'ireo mpandraharaha vahiny izy. Mampitombo ny fifantohana amin'ireo tranonkala filokana amin'ny Internet amin'ny fanatanjahantena.
Lisitry ny Top Sites amin'ny 10 Koreana Online
Ny site casino amin'ny aterineto dia manaiky ireo mpilalao avy any Korea Atsimo
Jereo ny lisitry ny tranokala an-tserasera izay manaiky mpilalao avy any Korea atsimo, ary manolotra lalao kalitao sy azo antoka. Eto ianao dia hahita fialamboly marobe manomboka amin'ny masinina slot ka hatramin'ny lalao casino mivantana amin'ireo mpivarotra rindrambaiko malaza toy ny NetEnt, Merkur, IGT, Novoline, Microgaming, Betsoft, Rival Gaming, sy ny maro hafa. Azonao atao koa ny mamaky ny hevitray momba ny tranokala an-tserasera, mba hahalalanao ny fampiroboroboana an-tserasera, bonus ary safidy fandoavam-bola tsara indrindra azon'ny mpilalao avy any Korea Atsimo.
Ry Lena malala, anio dia hilaza aminareo momba ny diany ho any Korea Atsimo aho, farafaharatsiny ao an-drenivohin'ity firenena goavana ity ho any Seoul. Misy tsara tarehy, madio ary mahafinaritra. Na izany aza, toa ahy, fa madio ihany koa ny arabe ao Pyongyang renivohitra Koreana Avaratra, saingy noho ny antony samihafa.
Na izany aza, Lena, fantatrao tsara fa tsy mahaliana ahy ny politika, tsy azo lazaina momba ny filokana. Any Seoul no misy azy, ny casino lehibe indrindra any Korea - Paradise Casino Walkerhill. Tsy ho tianao izany satria mampiroborobo ny fametrahana filokana ho iray amin'ireo mpilalao sarimihetsika tianao indrindra - Robert De Niro. Sa tianao i Al Pacino? Na inona izany na inona, araka ny asehon'i De Niro amin'ny takelaka takelaka maro. Nisy fotoana aho nanomboka nieritreritra fa izy no tompon'ny Paradise Casino Walkerhill. Amin'ny ankapobeny, raha marina izany dia tsy ho gaga aho.
Ny Paradise Casino Walkerhill dia milalao vahiny ihany, ny ankamaroan'ny olom-pirenena Japoney. Ny Koreana ihany dia ao ihany amin'ny maha mpiasa azy: ny mpitantana ny mpivarotra, ny mpandroso sakafo, ny mpivarotra bartender, ny artista ary ny hafa. Raha ny fanazavana, ny mpiasa ao amin'ity casino ity dia tena mahay. Ny fahalalam-pomba rehetra, matihanina ary miteny anglisy tsara, japoney ary fiteny vahiny hafa, miaraka amin'ny teny rosiana ihany ho zavatra tsy dia be loatra. Fa raha tsy izany tsy misy tsy fahalalam-pomba, herisetra tsy entona ary fihetsika ratsy. Izay rehetra tianao, Lena.
Fotoana izao handinihana amin'ny antsipiriany, satria, araka ny fantatrao, ao amin'izy ireo no mipetraka ilay iray izay matetika no voalaza fa namorona filokana. Ny Casino dia any Seoul ao amin'ny distrikan'i Kavanchzhin-gu Street Uokerhil-177 fa ao amin'ny Sheraton Hotel. Aza manontany ahy akory hoe ahoana no ahatsiarovako ilay adiresy. Raha ny tena izy dia hitako tamin'ny Internet fotsiny izany, ary amin'ilay casino tonga tamin'ny taxi, lazao fotsiny ny anarany ny mpamily.
Walkerhill dia toa tsara na ivelany na anatiny. Ny sarin'ny casino ihany no voarara mafy, afa-tsy ny fisotroana fisotroana sy fisakafoanana ihany. Ny tompona trano filokana dia tsy te hiala sasatra ny mpanjifa dia nandika ny tselatra. Ho fanampin'izany, misy olona saro-kenatra amin'ny filokana fialamboly. Amin'ny ankapobeny, noho ireo antony ireo dia misy olana amin'ny sary. Aza matahotra anefa, Lena, zavatra mbola vitako ny nitifitra.
Paradise Casino Walkerhill dia miasa mandritra ny ora tsy misy fahatapahana. Amin'ny lafiny fisehoan'ny fifehezana ny tarehy sy ny fepetra hentitra sasany tena henjana ao. Raha tsy avela ianao Lena, raha mitafy ny iray amin'ireo fitafiany miharihary sy vetaveta ianao, ary azo antoka fa tsy malahelo ny fianakaviananao manao pataloha fohy miendrika tady sy flip-flops ny dadanao, manao ba kiraro maloto. Na dia eo aza ny zava-misy any Japon mpifanila vodirindrina aminy, ny fijery dia heverina ho azo ekena.
Raha miresaka Japoney, ao an-trano, ireo tovolahy ireo dia amin'ny ankapobeny milamina, milamina ary voatokana, fa any ivelany toa ny mpisolo toerana azy ireo. The Paradise Casino Walkerhill Sambatra aho nihaona tamina tovolahy iray antsoina hoe Tanaka Esutigatsu. Rehefa nampahafantatra ny tenany izy dia nanontany azy aho indray mandeha raha mpikambana ao amin'ny fianakavian ninja izy. Nanomboka nihomehy izy, nampiseho ny nifiny miolakolaka ary nilaza fa ny ampahany amin'ny fianakavian'i Honda. Avy eo aho nanolotra toast ho an'ny mahazatra. alikaola mandefitra amin'ny ratsy Japoney - noho izany hoy hatrany aho, ary tsy nino aho. Saingy taorian'ny antsasak'adiny nampiasana cocktails samihafa dia nanadino tampoka ny anglisy i Tanaka ary naniry ny handihy teo ambony latabatra mba hitady blackjack aho. Marina ny tsaho. Efa nanomboka obliquely mijery serivisy fiarovana. Saingy nampitony ny tovolahy aho ary nampipetraka azy teo ambony latabatra.
Fantatrao àry i Lena, miloka mainty tanteraka ny milalao blackjack. Nanapa-kevitra ny hanampy ilay Japoney mahantra aho ary nividy chips ho azy. Nanomboka ny lalao, tsy nanam-bintana aho, 3,000 $ lasa tao amin'ny Casino Fund Fund. Mandritra izany fotoana izany dia nandresy tamin'ny fomba tsy fantatra i Tanaka. Nihatsara kokoa ny endriny ankehitriny, ary nifaly tamim-pitiavana ny fandresena tsirairay ny zaza. Nanapa-kevitra aho fa miaraka aminy ny zava-drehetra milamina ary lasa niantso. Nampiato ahy nandritra ny 40 minitra ny resaka. Rehefa tafaverina i Tanaka dia efa nahavita nandao an-tsekoly 15,000 XNUMX. Nanomboka nitomany izy ary nanolotra ny hametrahany ny palitao, lobaka, kirarony ary famantaranandron'i Casio. Vokatr'izany dia nitazona ny Japoney ny mpiambina, na teo aza ny fiezahako hanakana azy ireo. Uselessly. Saingy heveriko fa azonao ny votoatin'ny Lena - izany no Japoney amin'ny ora fialamboly tsy fahita firy.
Aza matahotra, Lena. Salama tsara i Tanaka. Nipetraka tao Sheraton izy. Izay tsy fantatro. Ny fahatsapana ho meloka dia nanosika ahy hitondra ny trano Tanaka, izay nipetrahanay tao anaty taxi ary nanomboka nanontany aho hoe aiza no misy azy. Eto i Japoney poluzasnuvshy dia nanomboka nitondra biliberdu vitsivitsy. Izay no azoko novaliana ihany: "Aiza ianao no mipetrapetraka!" Vokatr'izany dia naneno ny findainy ary tampoka izy nahatsiaro tena. Nentiko teo amin'ny fidirana amin'ny hotely ny Japoney, avy eo nanampy azy ireo ny mpiasa mba ho tonga ao amin'ny efitranonao. Taty aoriana dia tsapako fa i Tanaka - tovolahy ara-dalàna. Eny, ara-dalàna izany, mety handao ny casino $ 15,000 izy io. Na dia izany aza dia mety ho ny avonavona japoney mahazatra io.
Aleo miverina any amin'ny Paradise Casino Walkerhill. Tena mahonena ny Blackjack, fa ao amin'ny casino Korea lehibe indrindra, misy lalao hafa izay misy roulette 7 samy hafa, latabatra 15 ho an'ny blackjack, milina slot 150 eo ho eo, latabatra am-polony ho an'ny poker sy ny crap, ary koa ny kakoe- ny isan'ny latabatra tsy takatry ny saina ho an'ny baccarat. Tsy haiko hoe maninona ny olona no mieritreritra any Korea Atsimo, malaza be ity lalao ity.
Na dia mbola takiana amin'ny boribory sasany aza ny baccarat, saingy tsy azo atao ny mifaninana amin'i Texas Hold'em na kasety. Amin'ny lafiny iray Walkerhill tena tsara tarehy izy:
Lena, aza tsaraina tsara ny sary lao tsy misy ahy, milaza mitovy amin'ny sarotra amin'ny fakana sary any. Ary tsy nanao izany raha tsy efa nanan-anaka izy. Walkerhill amin'ny ankapobeny ny rivotra iainana eto no mampita ity sary ity:
Fotoana izao hijerena ny Paradise Casino Walkerhill. Noho izany, malalaka izy, mpiasa tsara, bara sy trano fisakafoanana mahafinaritra, lalao maro isafidianana. Inona no mety ho fatiantoka? Ny fahatsapana ny fanaraha-maso tsy tapaka, noho izany dia misy ny filokana ary tsy miala sasatra tsara. Miverina ao amin'ny Paradise Casino Walkerhill dia hanana latabatra maro ho an'ny baccarat, saingy izao no fitakiako manokana. Araky ny ohabolana hoe: Aza tia ny karatra - mamily ny kodiaran'ny harena.
Still Paradise Casino Walkerhill dia toerana tsara. Robert De Niro dia tsy manoro hevitra ratsy. Fa raha tsy mino an'i Lena Robert ianao dia tsy mitondra fiara fa aleo mandeha mijery azy rehetra amin'ny zavatra niainanao manokana. Na izaho aza afaka manome vola. Aza malahelo, toy ny Paradise Casino Walkerhill tena tiako.
0.1 Sarin'ady an-tserasera ao Korea Atsimo
0.2 Lisitry ny Top Sites amin'ny 10 Koreana Online
2.1 Ny site casino amin'ny aterineto dia manaiky ireo mpilalao avy any Korea Atsimo
mena stag tsy misy deposit bonus